မင်းရဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဟာ parine parvovirus ကိုမခံစားစေချင်ဘူးလား။ ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ ကမ္ဘာ့ခွေးများ
ထို့အပြင်ခွေးတစ်ကောင် parvovirus အဖြစ်လူသိများ Canine parvovirus၎င်းသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့်တိုင်အောင်ခွေးများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ခွေးများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကူးစက်တတ်ပြီးသေစေနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်အူသိမ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးများသောအားဖြင့်သွေးထွက်သံယိုဝမ်းလျှောခြင်းမှတစ်ဆင့်ကိုယ်ကိုပြသသည်။
ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတမရှိခြင်းကြောင့်ပိုင်ရှင်များစွာသည်ဤရောဂါကို Parvo လက္ခဏာများနှင့်ရှုပ်ထွေးစေသဖြင့် မှားတယ်.
1 ခွေးတစ်ကောင် parvovirus ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
3 ခွေးတစ်ကောင် parvovirus ဂီယာ
4 ခွေးတစ်ကောင် parvovirus ၏ differential ကိုရောဂါ
5 ခွေးတစ်ကောင် parvovirus ကုသမှု
ခွေးတစ်ကောင် parvovirus ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
Canine parvovirus ၎င်းသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်ထိုအခြိနျမှစ။ ကန ဦး strain ဗီဇပြောင်းလဲသွားတယ်, ဒါကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့တားဆီးသောဤရောဂါ၏သရုပ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အူသိမ်ကိုပိုမိုသက်ရောက်စေသည့်ရောဂါနှင့် enteritis ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရောဂါတစ်ခုအကြောင်းပြောနေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Canidae မိသားစုဝင်များကတီထွင်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာဆိုလိုသည်မှာ ခွေး၊ ၀ ံပုလွေနှင့် / သို့မဟုတ်ဝံပုလှေတိုင်းသည်၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
အလားတူပင်၎င်းသည်လျင်မြန်စွာမျိုးပွားနိုင်သည့်ဆဲလ်များအတွင်း၌အခြေချရန်ကြိုတင်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်အူလမ်းကြောင်း၊ သန္ဓေသားတစ်သျှူးများနှင့် / သို့မဟုတ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏တစ်ရှူးများဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်။ သို့သော် ပို၍ ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေများတွင်နှလုံးကြွက်သားကိုပင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးတိရစ္ဆာန်ကိုရုတ်တရက်သေစေနိုင်သည်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခွေးအူအတွင်း၌ရှိနေခြင်းတိုးပွားလာ ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏တိရိစ္ဆာန်ရဲ့အန္တရာယ်။ epithelial တစ်ရှူးကိုထိခိုက်သောအခါအလားတူပင်ဘက်တီးရီးယားများသည်ခွေးမစင်များအတွင်းသို့သွေးထဲ ဝင်၍ ယေဘူယျအားဖြင့်ရောဂါကူးစက်စေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ခွေးတစ်ကောင် parvovirus မျိုးရိုးဗီဇ mutation များအတွက်ခိုင်မာတဲ့ predilection ရှိပါတယ်သို့သော်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရောဂါလက္ခဏာကိုခွေး၌ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေသည့်အခါအမြဲတွေ့ရလေ့ရှိသောရောဂါလက္ခဏာများမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် parvovirus သည်ခွေးများတွင်မည်သို့စတင်သနည်းခွေးတစ်ကောင် parvovirus ၏အဓိကလက္ခဏာများမှာအဘယ်နည်း။
ခွေးများတွင်အိပ်ငိုက်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု။
soft spot ။
သွေးထွက်သံယိုဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် abbuse ။
အများအားဖြင့်, gastroenteritis ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်၎င်းသည်မကြာခဏရှုပ်ထွေးပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်နှောင်းပိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အလားတူပင်၊ ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများသည်ခွေးများမှအဆိပ်ပြသည့်လက္ခဏာများစွာနှင့်ရောထွေးနိုင်သည်။
သငျသညျဤရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုချင်းစီ (သင်သိရန်လိုအပ်သည်၀ မ်းလျှောခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ အဖျားစသည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။), သူတို့ကခွေးအတွက်မျှမျှတတလျင်မြန်စွာရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေ, ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကုသမှုစတင်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး။ ထိုသို့ဖြစ်လင့်ကစားဘေးဒဏ်သင့်သည့်ခွေးများသည်ဤလက်တွေ့လက္ခဏာများကိုအမြဲတမ်းတင်ပြလေ့မရှိသောကြောင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်၎င်းတို့သည်ငယ်သေးသောခွေးပေါက်စများနှင့်ခွေးအဟောင်းများကိုပါသတိမထားမိဘဲဖြစ်လေ့ရှိသည်။
အများဆုံးလေးနက်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ, Canine parvovirus သည်သွေးဖြူဥများကိုလျှော့ချနိုင်သည်ထို့အပြင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံနေရသောခွေးသည်အသက်သုံးလမပြည့်သေးသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည့်အခါ၎င်းသည်တင်ပြနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ နှလုံးသို့မဟုတ်ခွေးတစ်ကောင်နှလုံးရောဂါရောဂါအတွက်ရောင်ရမ်းခြင်း။ ၎င်းသည် ၀ မ်းပျက်ရောဂါကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ဘဲခွေးငယ်လေးအားရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပင်သေစေနိုင်သည်။
ရှင်သန်ရပ်တည်လျှင် နှလုံးပျက်စီးခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သောအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဒီတော့ဒီအခြေအနေကခွေးရဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ဤရောဂါလက္ခဏာအချို့သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအရာများကိုသိသောအခါ၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိရိစ္ဆာန်ဆရာထံအလျင်အမြန်ပို့ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးသင့်လျော်သောအချိန်နှင့်တပြေးညီရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ခွေးတစ်ကောင် parvovirus ဂီယာ
၎င်းဗိုင်းရပ်စ်သည်များသောအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်တည်ငြိမ်သောကြောင့်အများပြည်သူနေရာများတွင်၎င်းသည်လပေါင်းများစွာအတူတစ်နေရာတည်း၌တည်းခိုနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ခွေးများသည် parine parvovirus ကိုများသောအားဖြင့်ရလေ့ရှိသည်။ ခွေးဂေဟာများ၊ အမိုးအကာများ၊ အပန်းဖြေနေရာများသို့မဟုတ်ခွေးပန်းခြံများတွင်ရှိနေစဉ်။
ဒါ့အပြင် Pitbull terrier၊ German Shepherd, Rottweiler နဲ့ Doberman စတဲ့ဒီရောဂါတွေခံစားနေရတဲ့မျိုးစိတ်တွေရှိပေမယ့်အမှန်တရားကတော့သင့်ခွေးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အချက်အချို့ရှိပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ လူ ဦး ရေထူထပ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အူလမ်းကြောင်းကပ်ပါးပိုးများကဲ့သို့သောဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှခံစားရနိုင်သည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤရောဂါသည် ၆ လမပြည့်သေးသောခွေးပေါက်စများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်၊ သို့သော်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသောခွေးများသည်ထိုရောဂါနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဒါကြောင့် VET အလည်အပတ်ခရီးကအရမ်းအရေးကြီးတယ် ပုံမှန်အဖြစ်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအစီအစဉ်ကိုခြေရာခံရန်
အဆက်အသွယ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ပေမယ့်, အ ပုံမှန်အားဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ကူးစက်သည်ခွေးများသည်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသောဆီးသို့မဟုတ်မစင်များ၊ မိခင်နို့၊ အစာနှင့်အခြားအရာများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောအခါ၎င်းပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏ဖိနပ်များပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်ထားသော်လည်း၎င်းကိုမသိရှိခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, မှတ်သားသင့်သည်မှာကြွက်များသို့မဟုတ်အင်းဆက်ပိုးများသည်များသောအားဖြင့်ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသယ်ဆောင်သူများဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် deworming ထိုကဲ့သို့သောရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့မှကြွလာသောအခါ ဦး စားပေးဖြစ်ရမည်။
ကူးစက်ခံထားရသောခွေးများသည်ဤရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလက်တွေ့လက္ခဏာများကိုစတင်မပြမီအချိန် (၃) ပတ်အတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ကိုအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်။ သူတို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုအချိန်အတန်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ခွေးတစ်ကောင် parvovirus သည်လူသားများတွင်ကူးစက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသင့်သည်။
ခွေးတစ်ကောင် parvovirus ၏ differential ကိုရောဂါ
ပုံမှန်အားဖြင့်ခွေးအားပြသသည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဤရောဂါကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အဆင်ပြေဆုံးအရာမှာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအချို့ ပြုလုပ်၍ ရောဂါကိုအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရောဂါရှာဖွေရန်, အဆိုပါ VET ဟာမစင်နမူနာဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ် ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာမှတဆင့်ခွေးတစ်ကောင် parvovirus antigen ၏ရှေ့မှောက်တွင်ထူထောင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ။
ခွေးတစ်ကောင် parvovirus ကုသမှု
သင့်ခွေးသည်ဤရောဂါခံစားနေရကြောင်းပြသရန်တိကျသောရောဂါလက္ခဏာပြပြီးသည်နှင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်အခြေအနေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ ရောဂါလက္ခဏာကိုအတည်ပြုရန်နှင့်လိုအပ်သောကုသမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစတင်သင့်သည် နှင့်၎င်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်များမှာအချို့သောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သောရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်မညီမျှမှုတို့ကိုအခြားသူများအကြားတိုက်ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ရောဂါများ » Canine parvovirus
Paola Urdapilleta ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ခွေးများသည်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးထွက်မလာကြပါ။ အချက်အလက်များမှာအလွန်ပြည့်စုံပါသည်။ ခွေးလှေးကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ခွေးလှေးဈေးကွက်တွင် ၀ ယ်ယူခဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ခွေးမှာ (၁၂) နှစ်နှင့် (၁၀) လအရွယ်သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခွေးကိုအချိန်တန်လျှင်ကုသပေးသည်၊ ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောခွေးကလေး၏ဘဝကိုချက်ချင်းမည်သို့အဆုံးသတ်လိုက်သည်ကိုကြည့်လျှင်ကြောက်စရာကောင်းသည်။
Paola Urdapilleta အားစာပြန်ပါ